ဟာ ? ဒီလိုနေရာမှာ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်က ……။
မြို့ကို လမ်းလျှောက်သွားရင်တောင် ရှာတွေ့ နိုင်တာက တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ဖြစ်တယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ကို ၆ ခု လက်ရွေးစင်စုစည်းထားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ လှပတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် ဆက်ဆက်ခရီးသွားဖို့ နေရာအဖြစ် စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။
၁ ။ ဟယာမနို လူမနေကျွန်းမှာ ရှိတဲ့ တိုရိအိဂိတ်ပေါက် ! ( နာကျွန်း )
ခါနာဂါဝခရိုင်ရဲ့ မိုရိတိုကမ်းခြေမှာ ပေါ်နေတဲ့ လူမနေကျွန်းဖြစ်တဲ့ နာကျွန်းဖြစ်တယ်။ တိုရိအိဂိတ်ပေါက် ၊ မီးပြတိုက် နဲ့ဖူဂျီတောင်တွေက ရင်ဘောင်တန်းနေပြီး ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ရှုခင်းဖြစ်တယ်နော်။ ဒီတိုရိအိဂိတ်ပေါက်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၈၄၀ လောက်မှာ မီနမိုတိုနိုယော်ရိတိုမို စစ်သေနာပတိက ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ မိုရိတိုဘုရားကျောင်းရဲ့ ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ မီးပြတိုက်က ဘယာမမီးပြတိုက် ၊ အခြားနာမည် ယူးဂျိရိုးမီးပြတိုက်ဖြစ်တယ်။ မင်းသားကြီး ခိုအိရှိဟာရယူးဂျိရိုးရဲ့ သုံးကြိမ်မြောက် သေဆုံးခြင်းနှစ်ပတ်လည်ကို အထိမ်းအမှတ်လုပ်ပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ထူးဆန်းတဲ့ မြင်ကွင်းသုံးခုကို ဓါတ်ပုံ မရိုက်ကြဘူးလားဟင် ။
နေရာ: ခါနာဂါဝခရိုင် မိအူရမြို့နယ်၊ ဘယာမချော ဟိုရိအူချိ
လမ်းကြောင်: JR ဇုရှိဘူတာ ၊ ခဲအိခရူးဇုရှိဘူတာ မှ ( ခိုင်းဂန်မာဝရိဘယာမအိချိအီရို သို့) ဘတ်စ်ကားဖြင့် ( မိုရိတိုဘုရားကျောင်းဝင်ပေါက် ) ဆင်းပါ။ ဇူလိုင်လ မှ သြဂုတ်လက ကူးတို့ လှေသွားပါတယ်။ အခြားအချိန်က ကနူးလှေ၊ ကရန်းလှေ ၊ လက်လှော်လှေတွေကို ငှားလို့ ရနိင်မယ်ဆိုရင် သွားနိုင်ပါတယ်။ ကနူးလှေ နဲ့ ကရန်းလှေလှော်ဝါသနာရှင်တွေကြားမှာ လူကြိုက်များတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်။
၂ ။ လှိုဏ်ဂူထဲက တိုရိအိဂိတ်ပေါက် ( တန်းအန်းမြစ်ဝှမ်း အိုးဆဲဘိုခဲကျောက်လှိုဏ်ဂူ )
လှိုဏ်ဂူထဲမှာ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ရှိပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာက ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီမှာ နေနတ်ဘုရားက ကျောက်ဆောင်မှာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ သိန်း ၈၀ ရှိတဲ့ နတ်ဘုရားတွက စုစည်းပြီး နတ်သဘင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။
ဆုတောင်းပြီး ကျောက်တုံးတွေ ဆင့်ရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ပြောကြပြီး မရေတွက်နိုင်တဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ဆင့်ထပ်ထားကြပါတယ်။ လူကြီးမင်းဆိုရင်ရော ဘယ်လိုဆိုတောင်းမျိုးကို တောင်းမှာလဲနော်။
နေရာ: မီယဇခိခရိုင် ၊ နိရှိအူစုခိမြို့နယ်၊ တာခချိဟိုချော အိုးအာဇ အီဝတို
လမ်းကြောင်: ခူမမိုတိုဘူတာ ၊ ခူမမိုတိုလေဆိပ်မှ မီယဇခိဆက်သွယ်ရေးအမြန်ဘတ်စ်ကား ( တာခချိဟိုနံပါတ် ) စီးပြီး ၊ ( တာခချိဟိုဘတ်စ်ကားဂိတ် ) မှ ရိုဆမ်းဘတ်စ်ကားဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ။ တန်းအီဝတိုဘုရားကျောင်းသို့ ။ အဲဒီမှ ၁၀ မိနစ်လောက် ထပ်လမ်းလျှောက်ပါ။
၃ ။ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်ထဲမှာ တံတားဖြတ်သွားနေတယ်။ ( ယအိုတိုမိဘုရားကျောင်း )
နောက်ထပ်က ( အိုတိုရိဂိတ်ပေါက်ထဲမှာ တံတား ) ။
တာခဲကျွန်းရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ ယအိုတိုမိဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တိုရိအိဂိတ်ပေါက်က ဒီလိုမျိုး ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ၁၁၈၁ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဒီဘုရားကျောင်းက ကံကောင်းခြင်း ၊ ထိမ်းမြားခြင်း၊ မီးဖွားရလွယ်ခြင်းတွေရဲ့ နတ်ဘုရားအဖြစ် သိထားကြပါတယ်။
နေရာ : အာအိချိခရိုင် ၊ ဂန်းမဂိုရိမြို့၊ တာခဲကျွန်း၊ တာခဲတံတား
လမ်းကြောင်း : JR နာဂိုယာဘူတာမှ ရထားဖြင့် JR ဂန်းမဂိုရိဘူတာ ဆင်းပြီး ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်ပြီး တာခဲကျွန်းသို့ ။
သို့ မဟုတ် ဆမ်းရိုက်ဇုဘတ်စ်ကား စီးပြီး ( တာခဲဂျိမပန်းခြံ ) ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ရှေ့ မှာ ဆင်းပြီး ၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်